အချိုးတွေပြင်ပြီး ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းနေတာတောင် မုန်းတဲ့လူတွေရှိနေသေးလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ယုန်လေး | CeleTrend
ပရိသတ်ကြီးရေ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့ ယုန်လေးကတော့ စိတ်သဘောထားပြည့်ဝပြီး အခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေအတွက် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအမြဲကူညီတတ်တဲ့အပြင် တက်သစ်စ အနုပညာရှင်တွေကိုလည်း မြေတောင်မြှောက်ပေးနေသူ တစ်ဦးလဲဖြစ်ပါတယ်။လတ်တလောမှာတော့ ယုန်လေးက သူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကူညီပေးခဲ့ဖူးတဲ့ အဆိုဝါသနာရှင်လေးနှစ်ဦးနဲ့အတူ ဝမ်းစာဆိုတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ထွက်ရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါသီချင်းလေးကတော့ ၂၆နာရီအတွင်း ကြည့်ရှုသူ သုံးသန်းကျော်ရရှိခဲ့လို့ အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပေမယ့်လည်း တစ်ချို့အနည်းငယ်အတွက်တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိတဲ့အကြောင်းကို အခုလိုပဲရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။ “ ကျွန်တော် အရင်တုန်းက ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းနေခဲ့တယ် . ကိုယ့်လူထိတာ နဲ့ မှားမှားမှန်မှန်ပါတော့ ပါလေရာ ဆိုပြီး မုန်းကျတယ် .အဲ့ဒါလည်း သတိအန္တရာယ်ရှိသည် Page မှာပထမဆုံးတင်တဲ့ Video နဲ့ တောင်းပန်ပြီးပါပြီ ။တစ်ချို့ အခုထိ မုန်းနေတဲ့လူတစ်ချို့ အကောင့်အတု တွေဖွဲ့ပြီး လှူံ့ဆော်တယ် .အမှားတွေ များရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ အမှန်ဖြစ်တတ်တယ် .ကျွန်တော် ရေးထားတဲ့ သီချင်းကို ဝင်ဆိုခိုင်းတာကိုမုန်းတဲ့ လူတစ်စုက ယုန်လေးဝင်မဆိုနဲ့တို့ မင်းပဲဖျက်နေတယ် ဆိုပြီး လိုက်ပြောကျတယ်။
တစ်ချို့ တကယ်နားမလည်တဲ့ လူကျတော့လည်း ဒါကိုအဟုတ်ထင်လောက်တယ် . Key မဝင်ဘူးကပြောသေး2000 ခုနှစ်ထဲက Studio စရောက်နေတဲ့ လူပါ .သူတို့ထက် ကျွန်တော် အများကြီး နားလည်ပါတယ် .တစ်ယောက်ထဲ ဆိုတဲ့ သီချင်းတွေ မပြောဘူး .ငြိမ်းချမ်းချင်ပြီ မြန်မာပြည် . Save The Worldတို့လို လူပေါင်းစုံ ဆိုပေါက် ပေါင်စုံ Key အနိမ့်မြင့် မတူတဲ့ လူအများကြီးကို ၈မိနစ် ၉မိနစ် လောက်ရှိတဲ့ သီချင်းမျိူးကို Melody မတန်းဖို့မအိုင်ဖို့ဖန်းတီးရတာ မလွယ်တာ အဲ့ဒါက နားလည်တဲ့ လူတွေသိပါတယ် .အဲ့လို မုန်းပြီး အပျက်သဘော လိုက်ပြောနေတဲ့ လူတစ်စုကိုအရင်တုန်းက ဆိုရင်တော့ ဒေါသအရမ်းထွက်တယ် .အခုကျတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်တာ . ငါအချိုးတွေပြင်နေတယ်.အကောင်းဆုံးနေတယ် အကောင်းဆုံးဘဝ ကိုဖြတ်သန်းနေတာတောင် မုန်းတဲ့ လူတွေရှိနေသေးတယ်လို့ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် .Min Z နဲ့ ကျော်စွာ နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ၃ယောက် လုပ်ထားတဲ့ သီချင်းလေးတွေ ရှိသေးတယ် . အဲ့ကျရင်လည်းဒါတွေ ထပ်မြင်ရဦးမှာ အငြိူးတေးတွေရှိရင်လည်း ဒီမှာပြီးချင်ပါပြီ အားလုံး Peace . 🙏”ဆိုပြီး သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေ ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတျကွီးရေ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတျအားပေးမှုအခိုငျအမာနဲ့ အောငျမွငျမှုတှရေရှိနတေဲ့ ယုနျလေးကတော့ စိတျသဘောထားပွညျ့ဝပွီး အခကျအခဲဖွဈနသေူတှအေတှကျ တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနအေမွဲကူညီတတျတဲ့အပွငျ တကျသဈစ အနုပညာရှငျတှကေိုလညျး မွတေောငျမွှောကျပေးနသေူ တဈဦးလဲဖွဈပါတယျ။လတျတလောမှာတော့ ယုနျလေးက သူကိုယျတိုငျသှားရောကျကူညီပေးခဲ့ဖူးတဲ့ အဆိုဝါသနာရှငျလေးနှဈဦးနဲ့အတူ ဝမျးစာဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးတဈပုဒျထှကျရှိထားတာပဲဖွဈပါတယျ။
အဆိုပါသီခငျြးလေးကတော့ ၂၆နာရီအတှငျး ကွညျ့ရှုသူ သုံးသနျးကြျောရရှိခဲ့လို့ အတိုငျးမသိ ဝမျးသာပီတိဖွဈမိပမေယျ့လညျး တဈခြို့အနညျးငယျအတှကျတော့ စိတျမကောငျးဖွဈနမေိတဲ့အကွောငျးကို အခုလိုပဲရငျဖှငျ့လာခဲ့ပါတယျ။ “ ကြှနျတျော အရငျတုနျးက ရိုငျးရိုငျးစိုငျးစိုငျးနခေဲ့တယျ . ကိုယျ့လူထိတာ နဲ့ မှားမှားမှနျမှနျပါတော့ ပါလရော ဆိုပွီး မုနျးကတြယျ .အဲ့ဒါလညျး သတိအန်တရာယျရှိသညျ Page မှာပထမဆုံးတငျတဲ့ Video နဲ့ တောငျးပနျပွီးပါပွီ ။တဈခြို့ အခုထိ မုနျးနတေဲ့လူတဈခြို့ အကောငျ့အတု တှဖှေဲ့ပွီး လှူံ့ဆျောတယျ .အမှားတှေ မြားရငျ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ တဈခြို့နရောတှမှော အမှနျဖွဈတတျတယျ .ကြှနျတျော ရေးထားတဲ့ သီခငျြးကို ဝငျဆိုခိုငျးတာကိုမုနျးတဲ့ လူတဈစုက ယုနျလေးဝငျမဆိုနဲ့တို့ မငျးပဲဖကျြနတေယျ ဆိုပွီး လိုကျပွောကတြယျ။
တဈခြို့ တကယျနားမလညျတဲ့ လူကတြော့လညျး ဒါကိုအဟုတျထငျလောကျတယျ . Key မဝငျဘူးကပွောသေး2000 ခုနှဈထဲက Studio စရောကျနတေဲ့ လူပါ .သူတို့ထကျ ကြှနျတျော အမြားကွီး နားလညျပါတယျ .တဈယောကျထဲ ဆိုတဲ့ သီခငျြးတှေ မပွောဘူး .ငွိမျးခမျြးခငျြပွီ မွနျမာပွညျ . Save The Worldတို့လို လူပေါငျးစုံ ဆိုပေါကျ ပေါငျစုံ Key အနိမျ့မွငျ့ မတူတဲ့ လူအမြားကွီးကို ၈မိနဈ ၉မိနဈ လောကျရှိတဲ့ သီခငျြးမြိူးကို Melody မတနျးဖို့မအိုငျဖို့ဖနျးတီးရတာ မလှယျတာ အဲ့ဒါက နားလညျတဲ့ လူတှသေိပါတယျ .အဲ့လို မုနျးပွီး အပကျြသဘော လိုကျပွောနတေဲ့ လူတဈစုကိုအရငျတုနျးက ဆိုရငျတော့ ဒေါသအရမျးထှကျတယျ .အခုကတြော့ စိတျမကောငျးဖွဈတာ . ငါအခြိုးတှပွေငျနတေယျ.အကောငျးဆုံးနတေယျ အကောငျးဆုံးဘဝ ကိုဖွတျသနျးနတောတောငျ မုနျးတဲ့ လူတှရှေိနသေေးတယျလို့ပဲစိတျမကောငျးဖွဈမိတယျ .Min Z နဲ့ ကြျောစှာ နဲ့ ကြှနျတျောတို့ ၃ယောကျ လုပျထားတဲ့ သီခငျြးလေးတှေ ရှိသေးတယျ . အဲ့ကရြငျလညျးဒါတှေ ထပျမွငျရဦးမှာ အငွိူးတေးတှရှေိရငျလညျး ဒီမှာပွီးခငျြပါပွီ အားလုံး Peace . 🙏”ဆိုပွီး သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျကနေ ရေးသားထားတာဖွဈပါတယျ။